Mankalaza Ny Faha 51 Taonan’ny Fahaleovantena i Gambia, Fa Tsy Ny Rehetra No Mankalaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2016 7:13 GMT
Dawda Jawara no lasa filoha voalohan'i Gambia taorian'ny nahazoan'ny firenena fahaleovantena. Sary navoaka ambany fahazoandàlana Creative Commons, avy tamin'i Fernando Pereira/Anefo.
Ny 18 Febroary 2016, nankalaza ny faha 51 taonan'ny fahaleovantenany ilay fanjakana ao Andrefan'i Afrika, i Gambia, fahaleovantena avy tamin'i Grande Bretagne, maherin'ny 50 taona taorian'ny naha-fanjakàna faha-37 azy tao Afrika nanana ny fiandrianany ary ny farany tamin'ireo zanatany efatra Britanika nahazo fahaleovantena tao Afrika Andrefana.
Niantso ireo Gambiana ny filoha Yahya Jammeh hivondrona ary hivavaka ho an'ny fandrosoana mitohin'ny firenena, nampanantena fampandrosoana maharitra, filaminana, ary ny fahamarinan-toeran'ny fiainana:
Ndeha hotsiahivintsika fa tonga amin'izao ambaratonga izao isika ankehitriny tao anatin'ireo fihantsiana sy fifamonoana an-toerana. Zavatra fandre andavanandro ireo faminaniana ny fahapotehantsika ary ny filazàna ny tsy fahombiazantsika tamin'ny fanombohan'ny Revôlisiôna 22 Jolay. Niharan'ny fanokana-monina nataon'ireo mpandraharaha sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana isika teo amin'ny vondrona iraisampirenena. Na izany aza, miaraka tamin'ny fitahian'i Allah ny fanantenantsika tsy nety lefy, nahavita nanohitra ireo orana sy tafiotra rehetra natrehantsika isika noho ny fandavantena sy ny fanetren-tenantsika. Ary, Inshallah, mbola hitohy hihamafy hatrany ny tsy fanekentsika ho resy noho ny herin'ny fitokiantsika amin'i Allah, ny fanekentsika ny Sitrapony ary ny fitandremantenantsika tsy hanao ratsy araka ny voalazan'ny Boky Masin'i Korany sy ny Baiboly, ary araka ny nampiharan'ireo Mpaminanin'i Allah mba hampivelatra hatrany amin'ny tsara izay rehetra mahaolona.
Nifototra tamin'ny fifandeferana ara-pivavahana ny fanambaràn'ny Filoha, ny fiarahana miaina am-piaminana, ary ny fanolorantena amin'ny fivavahana mifanaraka amin'ilay fanambaràna vao haingana ny firenena ho fanjakana Repoblika Silamo. Hatramin'ny volana Jolay 1994 i Jammeh no teo amin'ny fitondrana, taorian'ny fanonganam-panjakana tsy nisy rà latsaka, izay naharava ny fitondran'ilay mpitarika ny fahaleovantena Dawda K Jawara. Nahitàna fampandrosoana ny fotodrafitrasa tsy azo tsinontsinoavina ny 21 taona mahery naha-teo amin'ny fitondràna azy, tafiditra amin'izany ny fanorenana sekoly sy làlana maro manerana ny firenena. Kanefa, voatsikera amin'ny ratsy ihany koa i Jammeh amin'ireo rakitra tsy fanajàna ny zon'olomeblona (indrindra amin'ireo mpanao gazety, ireo mpanohitra ara-politika, ary ireo mpiaro zon'olombelona).
Mankalaza ilay tsingerintaona any ivelan'ny Aterineto sy ao anaty Aterineto ireo Gambiana sy ireo naman'i Gambia, indrindra fa eny anaty media sôsialy, mizara ireo eritreriny mikasika ny dikan'ilay andro, raha sady mitodika amin'ny lasa sy mijery ny ho avy.
Modou Lamin Beyai, mpanao gazety, mamerina ny antson'ny filoha ho amin'ny fiombonana:
Ndeha isika hanadino ireo tsy fitoviana androany, ary hitsangana Hivondrona ho Gambiana mba hankalaza ity Andron'ny Fahaleovantena ity.
Amie Bella, nandefa ito lahatsary ito teo amin'ny alimanakan'ny Facebook-ny.
Ny Iraka Maharitr'i Soeda ho an'ireo Firenena Mikambana, nizara zava-nisy maromaro ary naniry an'i Gambia hankalaza ny fety am-pifaliana:
Happy #IndependenceDay #Gambia (Mirary Andron'ny Fahaleovantena Finaritra ry Gambia)! #DidYouKnow (Fantatrao ve) io no firenena kely indrindra any Afrika fa fonenan'ny vorona karazany 569?
Kanefa, tsy miabo daholo ny fihetsik'ireo olona rehetra tanatin'ny Aterineto. Nampiasa ilay fotoana ho entina manazava ny lazain'izy ireo ho vaninandron'ny tahotra tany Gambia ireo mpisera amin'ny Aterineto sasany sy ireo mpikatroka mafana fo miaro ny zon'olombelona.
Jeffrey Smith, Amerikana manampahaizana amin'ny zon'olombelona, nibitsika izao:
#Gambia mankalaza ny faha-51 taonan'ny fahaleovantenany’ androany, saingy mbola mijanona ho voafatotra & araraotin'ny ankamaroan'ireo fitondràna mpanao famoretana manerana ny tany
MamaLinguere Sarr, Gambiana mpanao gazety sady manampahaizana amin'ny zon'olombelona, nanoratra hoe:
@Smith_JeffreyT #Gambia, tsy mbola nalalaka na nahaleo tena izahay hatrizay! Zavatra mifanohitra be amin'ny hoe fahaleovantena ny fanànana an'i Jammeh eo amin'ny fitondrana
iray hafa mpampiasa Twitter no nitaraina hoe:
Tratry ny #independenceday (andron'ny fahaleovantena) finaritra ho an'ilay firenena tianay… The #GambiaAt51 #Gambia #Africa Tena mahamenatra hoe nandany 21 taona teo ambany #DictatorYayaJammeh (jadon'i Yaya Jammeh) ianao